प्रचण्डले गरे खुलासा मुद्दा र एजेन्डाका हिसाबले बाबुराम भट्टराईसँग फेरि एक हुने घाेषणा ! « Bagmati Online
प्रचण्डले गरे खुलासा मुद्दा र एजेन्डाका हिसाबले बाबुराम भट्टराईसँग फेरि एक हुने घाेषणा !
शनिबार जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराईको पुस्तक ‘गुमनाम आमाहरुको कथा’ विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अहिलेको परिस्थितिमा डा. बाबुराम भट्टराईसँग एउटै पार्टीमा नभएता पनि मुद्दा र एजेण्डाका हिसाबले आफूहरु फेरि एउटै मोर्चामा रहेको बताउनु भएको हो ।
त्यस्तै, उहाँले डा. भट्टराईको ‘गुमनाम आमाहरूको कथा’ भित्र रहेका रचनाहरूलाई सरसर्ती नियाल्दा हिजोका सबै स्मरण, अनुभव, अनुभूति ताजा भएर आएको आएका पनि बताउनुभएको छ । डा. भट्टराईले नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, जसपा वरिष्ठ नेता अशोक राईलगायतको उपस्थितिमा ‘गुमनाम आमाहरूको कथा’ विमोचन गर्नुभएको हो ।